कसरी मार्केटरहरू सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्दैछन्?
सोमबार, अगस्ट 20, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि कसरी मार्केटर्सले उनीहरूको व्यवसायको लागि सोशल मिडिया प्रयोग गरिरहेको छ, Hubspot Moz द्वारा निष्पादित सर्वेक्षणको ,,6,491 XNUMX १ सर्वेक्षण सर्वेक्षणकर्ताहरूबाट केहि नतीजाहरू प्रस्तुत गर्न एक इन्फोग्राफिक स्नैपशट सँगै खींचियो। डाटाaमा जारी गरियो संयुक्त webinar बीच Hubspot र Moz आज। एउटा चाखलाग्दो स्ट्याट, सर्वेक्षण सर्वेक्षणमा 44.4 XNUMX..XNUMX% ले भने कि उनीहरूको प्रवीणता स्तर सामाजिक मिडियामा रहेको थियो उन्नत or विशेषज्ञ स्तर!
बाट इन्फोग्राफिक: हबस्पट मार्केटिंग सफ्टवेयर। अस्वीकरण: हामी हबस्पटको सम्बद्ध छौं।
टैग: उन्नत सामाजिक मिडियाहबस्पटसेमोजसामाजिक मिडिया विज्ञसामाजिक मिडिया सर्वेक्षण
गुगल: बहु-भाषाको लागि सबडोमेन वा सबफोल्डर
वर्डप्रेस टेलिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै